Kafeega Oo U Wanaagsan Xusuusta Dumarka - Daryeel Magazine
Kafeega Oo U Wanaagsan Xusuusta Dumarka
Xeeldheerayaal caafimaad oo baaritaan ku sameeyey saamaynta uu bunku ku yeelan karo caafimaadka maskaxda ee gaar ahaan dumarka ayaa ogaaday in bunku uu khatar ku yahay xusuusta gabadha. Khubarada samaysay cilmibaaristan oo tijaabooyin badan sameeyey ayaa sheegay in sababta saamayntan tabani ay tahay unugyada xusuusta ee gabadha oo u nugul maaddooyinka ku jira Coffee -ga.
Tijaabada daraasaddan waxaa ka qayb galay 500 oo ruux oo isugu jira rag iyo dumar ay da’doodu ka yar tahay 60 sano, dadkan waxaa laga dalbaday in mid kasta oo ka mid ahi uu maalin kasta cabbo 3 koob oo Coffee ah, kadibna tijaabo lagu sameeyey isbeddelka dhinaca maskaxda eek u yimi, natiijada soo baxdayna waxa ay noqotay in gabadha aan Kofeega amabunka cabbin ama ugu yaraan aan badsanin awoodda shaqo iyo xusuusta maskaxdeedu ay ka fiican tahay dumarka kale ee iyagu sida aadka ah u cabba kofeega. Laakiin isbeddelkaas laguma arag raggii iyaguna tijaabadan lagu sameeyey.
In kasta oo Kafeega ama bunka siyaabo badan looga digo caafimaad ahaan, dhakhaatiirtuna uga digaan dadka qaba dhiig-karka, wadne xanuunka iyo xanuuno kale oo badan in ay cabbaan Kafeega, haddana taas macnaheedu ma’aha in bunku aanu lahayn faa’ido caafimaad. Daraasado hore loo sameeyey ayaa caddeeyey in cabbitaanka Kafeega ay hoos u dhigto cabsida ah in qofka uu ku dhaco xanuunka maskaxda burburiya ee Alzheimer oo dadka bunka ama kafeega aan cabbin ay boqolkiiba 20% kaga badan yihiin dadka cabba oo caafimaadka maskaxdoodu uu kor u kaco.
Qofka Oo Naftiisa La Sheekaysta Waxay Xoojisaa Awooda Xusuusta Maskaxda